कति मिनेटको यौनसम्बन्ध सबैभन्दा राम्रो ? – Sawal Nepal ||The Power of Information
कति मिनेटको यौनसम्बन्ध सबैभन्दा राम्रो ?
२०७६ असार १६, सोमबार २२:०२ मा प्रकासित
एजेन्सी । यौन क्रियाकलापको बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । र, खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो । तर, यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाईरहेको पाइन्छ । कि खासमा शारीरिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा कति समयमा स्खलन हुनु सामान्य हो भनेर । नेपालमा यसको अनुसन्धान भइसकेको छैन तर पश्चिमा देशमा भने यौन क्रियाकलाप गरिरहेका पार्टनरबीचको सामान्य सेक्स अवधी छुट्याएको छ ।